Amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana izao, mba hanaimaivanana ny fahasahiranan'ny raiamandreny dia hisitraka « kit scolaire » ny mpianatra amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany miisa 40 ao anatin'ny ZAP Ambovombe 1 sy 2. "Kit Scolaire" miisa 13 342 no tonga, ary efa notsinjaraina. Nambaran’ny Goverinoran'ny Faritra Androy, Dr Soja Lahimaro, fa miasa ny fitondram-panjakana, ary tsy manao ambanin-javatra ny tontolon'ny fanabeazana. Tsy maintsy hasiana fandrindrana, hoy izy, ny fomba hijerena manokana ny sosialin'ireo mpampianatra mbola tsy mahazo tambi-karama (non subventionnés) mba hamporisiha azy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 07 septembre 2021 10:46
Olan'ny SECREN : Niakatra eto Antananarivo ny solontenan'ny orinasa
Tonga eto an-drenivohitra ny delegasiona avy any amin'ny orinasa SECREN ahitana ny Tale Jeneraly Ntsay Abel, ireo mpikambana eo anivon'ny Filankevim-pitantanana ary ny solotenan'ny mpiasa miisa 11. Nisy avy hatrany ny dinik'asa notanterahana tetsy amin'ny Carlton Anosy niarahan'izy ireo tamin'ny ministry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny fanjifana, Edgard Razafindravahy. Nanotrona azy amin'ny fandrosoana vahaolana ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatanty Paubert. Misy ny drafitra ao anatin'ny fohy ezaka hamahana maika ny olana misy ankehitriny amin'ny fanefana ny karaman'ny mpiasa. Tsy maintsy hisy koa anefa ny drafitra maharitra hanavotana ny orinasa.
Tovolahy vao 18 taona i Mika. Anisan’ireo mpanendaka eo amin'ny lalamby, Espace Vatomanga, Jesosy Mamonjy Antohomadinika izy. Efa in-4 nigadra tamin'ity resaka fanendahana ity ny tovolahy saingy mivoaka foana. Ny 14 desambra 2020 izy no voasambotry ny Polisy Antaniavo avy nanendaka dia natolotra ny fitsarana ary nigadra. Ny 10 Martsa 2021 izy no tratran’ny Polisy 67ha raha nanendaka ary nigadra. Tratra nanendaka teo anoloan'ny Espace Vatomanga ny 31 Aogositra 2021 lasa teo izy dia izao tratra izao indray. Mivoaka miditra eny Antanimora i Mika ary mbola vao nivoaka ny fonja vao haingana izy no tratra izao.
Sary : AES
Natao ny sabotsy 28 Aogositra 2021 lasa teo ny fampitaovana milina vaovao ny lavadrano vaovao eo Mahavelo Ambovombe-Androy mba hahafahana mitrandraka rano hamenoana ny fitoerandrano vaovao 100m3. Vokatr’io dia mihoatra ny 220m3 isan’andro ankehitriny ny rano ahafahana mampitombo ny rano vokarin'ny AES (Alimentation en Eau dans le Sud) ao amin'ny tampon-tananan'Ambovombe . Nitsidika tao Ambovombe Androy ny Minisitry ny Rano sy ny Fidiovana ary ny Fanadiovana Rakotondrazaka Adrien Ladislas, notronin'ireo tompon'andraiki-panjakana ao Androy, ny Alakamisy 26 Aogositra sy ny sabotsy 28 Aogositra 2021 teo. Tamin'izany fitsidihana izany no nametrapetrahany ny amin'ny tokony ho fahamatoran'ny fintantana ireo fitaovam-pitaterana ampiasain'ny AES sy ny Ministeran'ny Rano mba hialana amin'ny gaboraraka izay isan'ny antony tsy mampandroso ny Faritra Androy ka mahatonga azy ho lasa "cimetière de projet". (Jereo Sary Tohiny)
Notoloran'ny Goverinora faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore, fanomezana sy fitsangatsanganana ireo mpianatra sangany tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC 2021 avy amin'ireo Distrika 7 mamaritra ny Faritra Atsinanana androany alarobia 01 septambra 2021. Ankoatra ny lanonana fanolorana fanomezana dia nisy ihany koa, niaraka tamin'ireto mpianatra ireto, fitsidihana ny Seranantsambon'ny Toamasina sy ny orinasa Savonnerie Tropicale, ary fiarahana nihinana lasopy tao amin'ny Restaurant Fortuna sy ny Glace Abdallah Awad izay samby mampalaza an'i Toamasina.
Niverina an-tsekoly ny mpianatra. Manomboka ity 1 septambra ity ny taom-pianarana 2021-2022, izay hizara roa volana in-dimy. Ny volana voalohany amin’ity taom-pianarana vaovao ity dia hatokana hanaovana famerenana sy fanenjehana ireo izay tsy vita tamin’ny taom-pianarana lasa noho ny fiatoan’ny fianarana nateraky ny fihibohana. Amin’ny volana jona 2022 kosa no hifaranan’izany amin’ny alalan’ireo fanadinana samihafa. « Apetraka eny anivon’ny sekoly ny fampisakafoanana an-tsekoly ; omena « caisse école » ireo sekoly isan’ambaratongany, ary hisy fiakarany izany amin’ity taom-pianarana 2021-2022 ity ; hahazo fitaovam-pianarana avokoa ireo mpianatra rehetra miisa iray tapitrisa mahery ; tsy hisy intsony ny fandraisana na fampidirana mpampianatra Fram eny anivon’ireo sekolim-panjakana manerana ny nosy ; napetraka ny lamina hiatrehana ny mety ho fisian’ny fikorontanan’ny fianarana raha sanatria mbola hisy ny valanaretina « Covid-19 », araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena.
mercredi, 25 août 2021 11:24
Ambovombe Androy : Omena tohana ara-pitaovana sy tantsoroka ara-teknika ireo tantsaha
Fitaovana isan-karazany toy ny motoculteur, sarety, angadinomby ho an'ny tantsaha mpamboly, ary lakana, harato, fitaovana fanaovana fia-saly, vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ireo mpanjono hiterizana ny vokatra amin'ny fotoana mampitobaka azy. Ireo no karazam-pitaovana natolotra teto Ambovombe toy ny natao tamin'ireo distrika hafa ihany koa. Izao dia ezaka avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny FDA (Fonds de Développement Agricole) izay natao hampitomboana ny ezaka ataon'ireo tantsaha mba hamokarana bebe kokoa hanatratrarana ny tanjona apetraka dia ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Tonga nanolotra izany teto ny solotena ny fitondram-panjakana ny Goverinoran'ny Faritra Androy Dr Soja Lahimaro, notronin'ny Mpanolotsaina teknika ny kestiora voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena no sady solombavam-bahoaka Henri Jean Michel, ary teo ihany ireo Talem-paritra maromaro. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 25 août 2021 10:14
Praiminisitra Ntsay Christian : “Manarina ny fahataràna teo aloha ny fitondram-panjakàna”
Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny faritra Atsimo Atsinanan’i Madagasikara ny Praiminisitra Ntsay Christian, fitsidihana izay tafiditra indrindra ao anatin’ny hetsika nametrahana ny « Asa Avo Mirindra » sy ny fotoam-panombohana ny fizaràna lay misy odimoka maharitra, ho an’ity Faritra ity. Nomarihin’ny Praiminisitra fa isan’ireo Faritra tena nianjadian’ny olana maro nandritry ny ady tamin’ny valanaretina Covid-19 ny Faritra Atsimo Atsinanana, ary nisy fiantraikany tamin’ny fiainan’ny mponina izany toe-javatra izany, ka nitady vahaolana maika sy ahazoana vokatra maharitra hatrany ny fitondram-panjakàna. Ohatra amin’izany ny fampananana asa tamin’ny alalan’ny « Asa Avotra Mirindra », fiaraha-miasan’ny ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsôsialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy, sy ny ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana ho Lovainjafy, ary ny FID, izay sady manokatra fidiram-bola ho an’ny mponina, no manampy amin’ny fikajiana ny tontolo iainana. Antenaina, hoy ny Praiminisitra, fa hahitan’ny vahoaka tombony izany tetikasa izany satria ny fanampiana azy ireo no tanjona.
mardi, 24 août 2021 08:58
RN4 Antananarivo - Mahajanga : Miharatsy ny làlana
Ankoatran'ny hateren'ny làlana izay efa tsy sahaza ireo fiarakodia vaventy mampitohy an'Antananarivo amin'i Mahajanga sy ireo faritra avaratra, dia efa miharatsy tanteraka ny làlam-pirenena faha 4. Maro ireo loza aterak'izany amin'ny fialana lavadavaka, mitombo ny fandaniana solika, ireo tetezana efa tsy mahazaka fiara lehibe intsony, na ny lanja zakainy na ny habeany. Nilaza moa ny Filoham-pirenena fa misy ny vola hikojakojana ireny làlana ireny amin'ny alalan'ny haba alaina amin'ny solika na ny FER, sy ireo vola notrosaina tamin'ny Banky iraisam-pirenena, ka antenaina tsy ho ela ny fanamboarana ity làlana izay mandray mpizahan-tany maro tokoa amin'izao fotoam-pialantsasatry ny mpianatra izao. (Jereo Sary Tohiny)
Bakalorea Antsiranana : Nanome vola ho an’ireo mpitsara fanadinana ny Governora sy ny Ben’ny tanàna
Tonga nihaona tamin’ireo mpitsara fanadinana bakalorea ao Antsiranana ny alatsinainy 23 aogositra ny Governoran’ny Faritra DIANA, Daodo Arona Marisiky sy ny Ben’ny tanànan’ny Kaominina ambonivohitra Antsiranana, Djavojozara Jean Luc Désiré. Nanolotra vola hanampiana ireo mpitsara fanadinana ireto farany, ka 20 tapitrisa Ariary avy amin’ny Governora ary 14 tapitrisa Ariary avy amin'ny Ben’ny tanàna. Mety hivaha ny olana ka hanomboka ny fitsarana ireo taratasim-panadinana amin’izay ireo mpitsara fanadinana miisa 150 eo, izay nitokona tsy nety nanatanteraka izany efa herinandro izao raha tsy voaloa ny tambin-karama na “vacation” tamin’ny taon-dasa. Araka ny fampahafantarana nataon’ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia efa nalefa tany amin’ny oniversite Antsiranana tamin’ny 10 aogositra 2021 ny vola tokony handoavana io “vacation 2020” io.